Wararka - Qaylo-dhaanta cilladda iyo xalka guddiga koronto-dhaliyaha koronto dhaliyaha
Awoodda tamarta naaftada genset kuma bilaabi karto oo si otomaatig ah uma joojin karto
1.Disel engine xiro gudbinta tallaabo lahayn.
Solenoid 2.diesel engine waa jabay.
1〉 Ku cabiray gudbinta mashiinka Diesel oo leh mitir dhowr ah, danab caadi ah oo shaqeynaya waa 25.5 V, haddii gudbinta wax ficil ah lahayn, bedel gudbinta. Komishan la'aan-xamuul, dhir si caadi ah u socota;
2〉 Ku cabiro solenoid mishiinka naaftada leh mitir fara badan danab caadi ah oo shaqeynaya waa 26.2 V, haddii kaligiis aan ficil lahayn, bedel mid. Komishan la'aan-xamuul, dhir si caadi ah u socota;
Mashiinka naaftada ayaa si otomaatig ah u shaqeynaya, laakiin qalabka digniinta cadaadiska saliidda ayaa hooseeya
〉1〉 gudiga xakamaynta ayaa muujinaya heerka saliida oo hooseeya
〈2〉 Saliida kudareysa saliida waxay kujirtaa miisaan buuxa;
3〉 Hubi shaandhada saliidu inay caadi tahay;
Normal4〉 Si caadi ah u hubi miiraha saliidda ku jirta ee saliidda lagu shubay.
Falanqaynta kore, xukunku waa qalad dareeraha dareeraha.
Ka saar fiilooyinka fiilada kuleylka ee saliidda, gacanta ku bilow mashiinka naaftada, unuga si caadi ah u socda. Kadib cadaadiska saliida soosaarida cadaadiska xun, beddel qeybta, mashiinka shaashadda ee korantada, ka xir khadka muunad qaadista hawada <3p>, mishiinka naaftada oo si otomaatig ah u bilaaba, hawlgalka unuggu waa caadi.
1. Hubi in saliidda mishiinka naaftada ay buuxsameen iyo in kale
2. Hubi fiilada induction induction
Marka gensetku si otomaatig ah u socdo, digniinta heerkulka sare ee biyaha ayaa markaa istaaga.
1. Guddi maamusha ayaa tilmaamaya kuleyliyaha sare ee biyaha, shaashadda shaashadda LCD ee heerkulka biyaha ee 100 digrii, culeyska ac waa 140 A <xamuul kala duwan lagu qiimeeyay>.
2. Heerkulku wuxuu furaa biyo qaboojiye wareeg ah
3. Si sax ah u hubi fiilada kuleylka ee kuleylka
4. Taangiyada biyaha qaboojinta ayaa buuxa
Falanqaynta kor ku xusan, Xukunka haanta biyaha hawo waa mid aad u wasakh badan, heerkulka biyaha oo sareeya ayaa sababay dhawaaqa digniinta.
Ka qaad haanta biyaha, nadiifinta hawo-biyoodka (haanta biyaha), rakibida ka dib, genset-ka otomaatiga ah ee bilowga ah, hawlgalka unuggu waa caadi.
Markaad nadiifiso hawo-biyoodka (haanta biyaha), adoo ku daraya alkali biyo si sax ah, taasi micnaheedu waa, biyo saaid ah kadib alkali yar dhig, si aysan u dhaawacin hawo-mareenka (haanta biyaha).
Marka gensetku si otomaatig ah u socdo, alaarmiga alaarmiga yar ayaa markaa istaaga.
1. Guddi maamusha ayaa tilmaamaya cadaadiska saliidda oo hooseeya
2. Saliidda saliidda ku jirta ayaa si buuxda u socota;
3. Hubi shaandhada saliidu inay caadi tahay.
Falanqaynta kore: xukunku waa xakamaynta cadaadiska saliida.
Ka saar guddiga xakamaynta cadaadiska saliidda, haddii la cabiro danab ac waa 385 V oo mitir badan leh, danab gelintu waa caadi. Hubi haddii xakamaynta cadaadiska saliida ay taabato barta aan loo baahnayn, burush isku day oo hagaaji xiriirka. Diesel genset si otomaatig ah ayuu ku bilaabmaa, hawlgalku waa caadi.
1. Tilmaame-hawleedka koontaroolayaasha heerkulka sare ee biyaha, mitirka biyaha wuxuu akhriyaa 68 digrii
2. Taangiyada biyaha qaboojinta ayaa buuxa
3. Hubi xiisadda suunka taageereha ee ku dhex jira baaxadda loo qoondeeyay, mashiinka shaqeynaya, mishiinka naaftada uma muuqan ifafaalo dabacsan.
Falanqaynta kore: heerkulku ma furna.
Ka fogee heerkulbeegga oo beddel. Diesel genset si otomaatig ah ayuu ku bilaabmaa, hawlgalku waa caadi.
Mashiinka Diesel waa la xiray si qasab ah wareegaya nidaamka qaboojinta biyaha, heerkulbeegga waxaa loo isticmaalaa in lagu beddelo socodka wareegga biyaha qaboojinta, si loo gaaro hadafka xakamaynta otomaatiga ah ee xoojinta qaboojinta. Heerkulbeeg lagu rakibay madaxa dhululubada meesha ay ka baxaan ilaha biyaha. Marka hawsha dayactirka, looma oggola inay joojiso heerkulbeegga si caadi ah, waxay saameyn ku yeelan doontaa isticmaalka caadiga ah ee mishiinka naaftada. heerkulka furan ee heerkulbeegga yar waa 68-72 digrii, heerkulka furan oo buuxa waa 80-86 digrii, samee qaabka wareegga biyaha qaboojinta. Biyaha qaboojintu waa inay isticmaalaan biyaha la nadiifiyey, oo waxay ku daraan miridh iyo barafow.